Florentino Perez oo sheegay in Zinedine Zidane uu dib ugu soo laaban doono kooxda Real Madrid – Gool FM
Florentino Perez oo sheegay in Zinedine Zidane uu dib ugu soo laaban doono kooxda Real Madrid
(Real Madrid) 23 Sab 2018. Madaxwaynaha kooxd Real Madrid Florentino Perez ayaa kaga hadlay mustaqbalka tababare Zinedine Zidane, kadib shir jaraa’iid ay maanta ku wada yeesheen madaxda sare ee kooxda Los Blancos garoonka Santiago Bernabeu.
Madaxwaynaha Real Madrid Florentino Perez ayaa soo bandhigay muuqaal gaar ah oo ku saabsan Zinedine Zidane ee heysta koobkii UEFA Champions League.
Dhamaan xubnihii ku sugnaa shirka jaraa’id ee ka dhacay garoonka Santiago Bernabeu ayaa waxay salaam sharafeed weyn ka qaateen sawirka Zidane, Perez ayaana intaas kadib la wareegay hadalka wuxuuna ka hadlay macalinka reer France.
“Kani waa Real Madrid, wuu ka war qabaa in albaabada Santiago Bernabeu aysan ka xirneen mar walba, Zidane waa magac weyn ee kooxda Los Blancos ah”.
“Waxaan mar walba doonayaa inaan u mahad naqo wax walba oo uu ina siiyay, kani waa gurigiisa waqti kasta, sidoo kale Ronaldo waa gooldhaliyihii ugu fiicnaa taariikhda Real Madrid, waan xasuusnaan doonaa, waxayna sheekadiisa gaari doontaa jiilba jiilka ka dambeeya”
“Qofka labo sano iyo shan bilood kaliya kula guuleestay 13 koob, kooxdaan mar walba waa gurigiisa oo kale”.
“Waxaan luminay kalsoonida aan ugu guuleysan karnay Premier League xiligii Wenger”… Santi Cazorla